अमेरिका फिफा महिला विश्वकपको उपाधी नजिक
एजेन्सी । फ्रान्समा जारी फिफा महिला विश्वकपमा साविकको च्याम्पियन अमेरिका फाईनमा प्रवेश गरेको छ । इंग्ल्याण्डलाई दुई एक गोलअन्तरले पराजित गर्दै अमेरिकाले लगातार तेस्रो पटक उपाधी नजिक पुगेको छ । फ्रान्सको लियोनमा अमेरिकाका क्रिस्टियन प्रेसकलाले खेलको १० औ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाईन् । तर, त्यसपछि खेलको १९ औं मिनेटमा इंग्ल्याण्डका एलेन ह्वाइटले गोल […]
जित्नैपर्ने दबाबमा इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड, कस्ले मार्ला बाजी ?
ऐजेन्सी । जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको लिग चरणअन्र्तगतको खेलमा अहिले घरेलु टोली इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डबीच प्रतिस्पर्घा चलिरहेकोे छ । म्यानचेस्टरस्थित ओल्ड ट्राफोर्डमा जारी खेलमा इंग्ल्याण्डले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेपछि न्युजिल्याण्ड फिल्डिङमा उत्रिएको छ । दुवै टाली आजको खेलमा जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने दाउँमा छन् । प्रतियोगिताको अन्तिम चारमा पुग्नका लागि दुवै […]
नेपाल एसीसी यु–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेटको सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ । मलेसियामा जारी एसीसी यु–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले सानदार सुरुवात गरेको । बुधबार भएको खेलमा चीनलाई १० विकेटले पराजितसंगै नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश ग¥यो । चीन समुह चरणका दुबै खेलमा पराजय भएपछि समुह ए मा रहेको नेपाल स्वतः अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो । यसअघि चीन सिंगापुरसंग ८ विकेटले पराजित भएको थियो […]
कोपा अमेरिका : घरेलु टोली ब्राजिल उपाधी नजिक
ऐजेन्सी । घरेलु टोली ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनालार्ई दुई शुन्य गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल उपाधी नजिक पुगेको हो । ब्राजिललाई उपाधी नजिक पु¥याउन ग्याब्रियल जिसस र रोबर्टो फिर्मिन्हा एक–एक गोल गरे । खेलको १९ औ मिनेटमा ब्राजिलका ग्याब्रियल जिससले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए […]
खेल क्षेत्रमा सिण्डिकेट : कायम राख्ने पक्षमा पूर्वमन्त्री देखि नेकपाका सांसद !
काठमाडौं । नेकपाका पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरु खेलकुद क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम राख्ने पक्षमा उभिएका छन्। पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सांसदसमेत रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रिय खेलकुद संघको सिफारिसमा मात्र स्थानीय तहले देलसंस्था दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका पक्षमा उभिएका हुन्। उनीहरुले यस्तो कानुनी व्यवस्थामार्फत खेल क्षेत्रमा कायम रहेको सिंण्डिकेटलाई निरन्तरता दिन […]
स्पेन बन्यो युरोपियन यू–२१ फुटबलको च्याम्पियन
एजेन्सी । पाँचौ संस्करणको युरोपियन यू–२१ फुटबल च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको उपाधि स्पेनले जितेको छ । आईतबार राति भएको खेलमा जर्मनीलाई दुई एक गोलले पाखाँ लगाउँदै प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्यो । खेलको पहिलो हापको ७ औ मिनेटमा स्पेनका फेबियन रुइजले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि ६८ औ मिनेटमा दानी ओलमोले गोल थप्दै स्पेनको अग्रता दोब्बर […]
श्रीलंका र वेस्ट इन्डिजको भिडन्त, कस्ले मार्ला बाजी ?
ऐजेन्सी । जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अहिले श्रीलंका र वेस्ट ईन्डिजबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । इंग्ल्याण्डस्थित चेस्टरमा जारी खेलमा वेष्ट इण्डिजले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि श्रीलंकाले सुरुवातमा ब्याटिङ थालेको छ । सेमिफाईनलको दौडबाट बाहिरिसकेको यी दुई टोली जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएका छन् । श्रीलंका ७ खेलमा २ मा जित र ३ मा हारका […]
विश्वकप क्रिकेटमा शीर्ष टोलीको टकराव
एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठूलो भिडन्त विश्वकप क्रिकेट इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी छ। १२ औँ संस्करणको यो विश्वकपमा १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
आज पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँग खेल्दा अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड भिड्दैछन् ।
श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको भिडन्त सुरु, टस हारेको श्रीलंका ब्याटिङमा
ऐजेन्सी । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अहिले श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीच प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ । इंग्ल्याण्डको चेस्टरस्थित रिभर साईड ग्राउण्डमा जारी खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि श्रीलंका ब्याटिङमा उत्रिएको छ । श्रीलंका जित निकाल्दै सेमिफाइनलको सम्भावना जीवित राख्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको छ भने दक्षिण अफ्रिका बाहिरिसकेको टोली हो । दक्षिण अफ्रिकाका […]